समृद्धिका लागि राजनीति कहाँ गर्ने कहाँ नगर्ने स्पष्ट हुनुपर्छ : पूर्वन्यायाधीश रायमाझी - Transparency International Nepal
मिलनचन्द्र खनाल/काठमाडौं, १७ माघ । पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीले रिस उठेकालाई ठीक लगाइदिने पहिलेजस्तो व्यवस्था मुलुकमा नरहेको भन्दै लोकतान्त्रिक संस्कार विकासमा जोड दिएका छन् ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘न्यायपालिकाको स्वाधीनता र सुधारको आवश्यकता’ विषयक छलफल कार्यक्रम बोल्दै रायमाझीले उक्त कुरा बताएका हुन् । ‘हिजोको राजनीति सजिलो थियो । रिस उठेकालाई ठीक लगाइदिँदा हुन्थ्यो तर प्रजातन्त्रमा त्यस्तो हुँदैन । त्यति सजिलो निश्चय नै हुँदैन,’ उनले भने, ‘राजनीतिक, आर्थिक संस्कार नभएसम्म केही सुधार हुन सक्दैन । लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने भन्ने तर त्यस्तो संस्कार नै छैन ।’
उनले नेपाल अधोगतितर्फ लम्कनुमा लोकतान्त्रिक संस्कार नहुनु नै प्रमुख कारण रहेकोमा जोड दिए । उनले भने, ‘प्रजातन्त्र उदयपछि अरु देश समृद्धितर्फ लम्कन्छन् तर हामी अधोगतितर्फ किन लम्किरहेका छौं । संस्कार राम्रो बनाउन सकियो भने धेरै विकृति त्यसै हराउँदै जानेछ ।’ नेपालमा अनावश्यक राजनीति भएको भन्दै उनले जहाँ पायो त्यही राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्न सुझाव दिए । उनले अगाडि थपे,’राजनीति कहाँ गर्ने कहाँ नगर्ने ? त्यो कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी छ ।’
छलफल कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले न्यायपालिकाको स्वाधीनता र सुधारको आवश्यकता विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसैगरी कार्यपत्रका बारेमा पूर्वन्यायाधीश कमलनारायण दास र पवनकुमार ओझाले टिप्पणी गरेका थिए ।
कार्यपत्र प्रस्तुतिका क्रममा डा. सुरेन्द्र भण्डारीले नेपालको न्यायालय विचौलियाका भरमा चलेको र न्यायपालिका खतरामा परेका बेला कलम चलाउनु पनि संवेदनशील रहेको धारणा राखे । उनले अगाडि भने, ‘हाम्रा राजनीतिक दल र नेतृत्वले आफू र आफ्नो पार्टीप्रति नरम व्यक्तिहरुलाई न्यायाधीशका रुपमा नियुक्त गर्न उद्यत छन् । बारका प्रतिनिधिले समेत न्यायपरिषद्मा बिना राजनीतिक ‘ह्याट’ प्रतिनिधित्व गर्न सकिरहेका छैनन् ।’ उनले मुलुकको मुलुकका बेथिति सच्याउन पहल गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न नसकिरहेको धारणा राखे ।
‘अहिलेको न्यायपालिका स्वाधीन छ भन्ने कुरामा म सहमत छैन । यद्यपि न्यायालयमा विद्वान् न्यायाधीशहरु प्रशस्त छन्,’ उनले भने, ‘तर मूलतः संस्थागत रुपले त्यसको सदाचारिता बचाउन सकिरहेका छैनन् ।’
टिप्पणीकर्ता कमलनारायण दासले कार्यपत्रका बारेमा टिप्पणी गर्दै नेपालको न्यायपालिका सिकर्मीको भर्‍याङको भएको आरोप लगाए । ‘हामीकहाँ सिकर्मीको भर्‍याङ कहिल्यै राम्रो बन्दैन भन्ने उखान नै छ,’ उनले भने, ‘मुलुकको राजनीति बिग्रिँदै गएको छ, त्यसको छायाँ न्यायालयमा पनि परेको छ । सुध्रिने लक्षण नै छैन ।’ न्यायाधीश नियुक्तिका बारेमा धेरै कुरा बाहिर आइसकेकै छन् भन्दै उनले प्रक्रिया नपुर्‍याई न्यायाधीश नियुक्ति भएका घटना सबैलाई थाहा भएको स्मरण गरे ।
अर्का टिप्पणीकार पवनकुमार ओझाले न्यायपालिकामा न्याय किनबेच हुन्छ भन्ने अचम्मको घटना हुनु दुखद रहेको बताए । उनले भने, ‘श्रीमद्भागवतमा पनि यो कलियुगमा न्याय किनबेच हुन्छ भनेर लेखिएको छ । हामीकहाँ ठयाक्कै त्यस्तै अवस्था छ । यो अनौठो परिस्थिति हो । स्वच्छ न्यायपालिकाको परिकल्पना गरिरहँदा त्यस्तो विषय उदेकलाग्दो विषय हो ।’
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीनेपालमा न्यायाधीश र कानून व्यवसायीमा सुधार आउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘हाम्रो न्यायपालिकाको आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । हामीसँग धेरै कानूनहरु छन्,’ उनले भने, ‘जसका माध्यमबाट हाम्रा न्यायपालिकामा सुधार ल्याउन सकिन्छ । मुख्य कुरा यसका लागि तयार मानिसहरु कति छन् भन्ने हो ।’
पूर्वसचिव खेमराज रेग्मीले डा. सुरेन्द्र भण्डारीलाई बहालवाला प्रधानन्यायाधीशले ज्यान मार्ने धम्की दिनुभएको कुरा निन्दनीय रहेको धारणा राखे । वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार आचार्यले मन्त्रिपरिषद्का सदस्य नियुक्ति गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भएजस्तै त्यस्तो अवसर प्रधानन्यायाधीशलाई हुनुपर्ने धारणा राखे । कार्यक्रममा ६० जनाले सहभागिता जनाएका थिए । कार्यक्रम टी आई नेपालका अध्यक्ष श्रीहरि अर्यालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।
No Comments to "समृद्धिका लागि राजनीति कहाँ गर्ने कहाँ नगर्ने स्पष्ट हुनुपर्छ : पूर्वन्यायाधीश रायमाझी"